DAAWO: ”Askarta Somalia qaar baa tuugo ah” – Senatar Maraykan ah oo soo jeediyay in la jaro lacag uu sheegay inuu Maraykanku bixiyo! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: ”Askarta Somalia qaar baa tuugo ah” – Senatar Maraykan ah oo...
DAAWO: ”Askarta Somalia qaar baa tuugo ah” – Senatar Maraykan ah oo soo jeediyay in la jaro lacag uu sheegay inuu Maraykanku bixiyo!
(Washington DC) 13 Juun 2018 – Sen. Rand Paul, oo Xisbiga Jamhuuriga ku metela gobolka Kentucky, isla markaana ah guddoonka guddi hoosaadka la socoshada halka ay ku baxdo lacagta dowladda federaalka iyo maareeynta xaaladaha degdegga ah ayaa soo jeediyay in la jaro wax uu ku sheegay lacag lagu bixiyo ciidamada Somalia.
“Waxaa jirta 920 tusaale oo carruur la askareeyay ama inay dagaallamaan lagu khasbay ah. Waxaa sidoo kale jirta marqaatiyo muujinaya in carruurtaa qaarkood ay Al Qaacida yihiin. Waxaa kaloo jirta in askartaa qaarkood aysan ahayn wax ka badan burcad jid jiif ah,” ayuu yiri Sen. Rand Paul, R-Ky.
Waloow uu Maraykanku sanadkii hore goostay lacag yar oo uu siin jirey ciidamada Somalia, misna waxay guddigani sheegayaan in ay jirto $8 milyan oo weli la bixiyo, taasoo ay ku jirto $4.3 milyan oo la siiyo ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ee SNA (Somali National Army).
“Qaanteennu waxay sanadkan noqonaynaa Tarilyan doollar. Halkee lacagtaasi ka imanaysaa? Inaan dareeys u iibinno ciidamada Soomaaliya oo aan mushaarkooda bixinno ilama aha inay tahay wax faa’iido u yeelanaya in lagu bixiyo doollarka canshuurta dadka Maraykanka,” ayuu raaciyay Paul.
Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa mar kasta sheega inay lacago ku bixiyaan dalka Somalia, waloow aysan jirin marqaati iyo wax la taaban karo oo ay soo bandhigaan.
Previous article3 dal oo qura ayaa ilaa hadda Somalia kaalmo toos ah siiya! (Waa kuwee?)
Next articleNin Kacbada barakaysan iskugu diley sabab lala yaabay! + Sawirro